(1) Cilmu-nafsiga - Ereyga "Psychology" waxaa laga soo qaatay laba eray oo "Griig" ah - Psycho iyo Logos. Griig ahaan, macnaha "Psychi" - Ruuxa iyo Logos - waa "Science". Sidaas ereygan macnaha buuxa ee "sayniska nafta" waa. Taasi waa, in "luqadda Griiga", nafteenna xagga cilmi nafsiga
(2) Psychology - Ereyga cilmu-nafsiga waxaa loogu magac daray "Psychology" oo ku qoran luuqada Hindi. Cilmu-nafsiga waxaa loola jeedaa "sayniska maskaxda" ama - "sayniska waxqabadka maskaxda". Taasi waa, 'cilmu-nafsiga waa saynis lagu xukumo maskaxdeena, maskaxdeena. Micnaha eraygan "cilmu-nafsi" ayaa loo arkaa inuu is beddelayo waqti ka dib.
(3) Laga soo bilaabo muddadii ilaa iyo qarnigii 16-naad ee CE - waxaa lagu magacaabi jiray "sayniska nafta". Taageerayaasheeda waaweyn - "Socrates, Plato, Aristotle, Ram, Hobbes, iwm.
(4) Laga soo bilaabo qarnigii 16aad ilaa qarnigii 17aad, waxaa la oran jiray - "Science of maskaxda ama maskaxda". Taageerayaasheeda waaweyn - "Thomas, Reid, Locke iwm.
(5) Laga soo bilaabo qarnigii 17aad ilaa qarnigii 19aad - waxaa la oran jiray - "Science of Consciousness". Taageerayaasheeda adag - "William James, Tichner, Jameslee - iwm ayaa sameeyay.
(6) Laga soo bilaabo qarnigii 19aad ilaa erayga "waqtigan xaadirka ah" - waxaa loogu magac daray "Science of Behaviour". Taageerayaasheeda aadka u jecel - kaliya "Watson" ayaa sameeyay.
Shaybaarkii ugu horreeyay ee cilmu-nafsi ee dalalka reer Galbeedka waxaa markii ugu horreysay la aasaasay "William Wunt"
Sida laga soo xigtay Wilson, "cilmu-nafsi" - "Maskaxda ayaa ku jirta" nidaamka limpic "maskaxda dhexdeeda.
Daraasadda "cilmu-nafsiga Reer Galbeedka" waxay ka bilaabatay Hindiya qiyaastii 20 (qarnigii labaatanaad).
➤ Falsafadda Hindida, xoogga la saarayaa barashada aqoonta iyo isku xirnaanta xagga cilmi nafsiga. Taas oo ahmiyad la siinayo daraasadda damiirka (maanka, caqliga, isku-kalsoonaanta, maanka iyo nafta) iwm. Tan hoostiisa, dabeecadda waxaa lagu sharraxay "afarta urur". Taasi waa, waxaa lagu nuuxnuuxsaday in si fiican loo fahmo dabeecadda qofka afartaas khasnadood.
Afartaas hanti waa sida soo socota -
Annamaya Kosha - Marka la eego Anmaya Kosha, "Gyanandris" iyo "Karma Indras" ee jirkeena ayaa la darsay.
Ran Pranmaya Kosh - Under "Pranmaya Kosh" ee falsafada Hindiya - "Awoodda jirka" iyo "Prana Shakti" ayaa inta badan lagu bartaa.
(iii) Manumaya Kosh - Falsafadda Hindida ka hooseysa - "maanka" ee cunugga waxaa lagu bartay "Manumaya Kosh".
(iv) Vigyanamaya Kosh - Marka loo eego falsafadda Hindiya - "Xikmadda" ee ilmaha waxaa lagu soo daray "Vigyan - Maya" Kosh.
Xusuusin-Psychology waa laan falsafadeed - oo ay markii hore ku kala baxeen "William James".
Marka loo eego cilmu-nafsiga Hindi - cilmu-nafsiga waa sayniska xafidaya khibradaha laga soo qaatay "dareennada dibedda" ee ku jira maskaxdayada. Si kale haddii loo dhigo, waayo-aragnimada noocan oo kale ah ee maankeena ku badbaadaya - caqli - naf - nafta - iwm. - waa cilmi nafsiga. Khubarada cilmu-nafsiga ama kuwa fikirka leh ee Hindiya waxay maskaxda ugu yeeraan "dareen lixaad".
Cilmu-nafsiga - Marka loo eego Fechner - "Daraasadda cilmi-nafsiga - waa horumarka hababka dhimirka.
Sida laga soo xigtay cilmi-nafsiga Fied iyo Chugh - "cilmu-nafsiga waxay leedahay laba heer - taas oo
Heerka koowaad waa mid miyir qaba halka heerka labaadna uu yahay - - miyir doorsoome - sidaa darteed - Fried iyo Chugh - oo sidoo kale loo yaqaan aabbaha miyir-qabka iyo miyir-la'aanta. "